စီမံကိန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားရန် အစိုးရနှင့် KNU ကို ဒေသခံများ တိုက်တွန်း | ဧရာဝတီ
ကျော်ခ| November 7, 2012 | Hits:16,889
8 | | ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်တွင်း ကျေးရွာပေါင်း ၂၇ ရွာမှ ရွေးချယ် တင်မြောက်ထားသော ကိုယ်စားလှယ် ၁၀၀ ကျော်က ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည် (ဓာတ်ပုံ – လူထုဆုံရပ်)
မြန်မာ့ အသားတင်ပို့မှု တရုတ် အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment sawmin November 7, 2012 - 4:17 pm	ထိန်းချုပ်တဲ့ နယ်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စည်းကမ်းစဉ်မျဉ်းဥပဒေနဲ့ ထိန်းချုပ်လိုက်ပါ လူမျိုးရေးပတ်သက်ပြီး လူမှူးကြီးကြပ်ရေးရုံကိုဖွင်းလိုက်ပါ နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား နိုင်ငံသားမခံချင်ရင် ယာယီမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်ပါ ဘယ်နှစ်နှစ်ပေးချင်လည်း သို့မဟုတ် နှစ်နှစ် သုံးနှစ် နောက် ကုမ္ပဏီတွေအများပြာဝင်လာဦးမယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေသာအရေးကြီးသည် အကျိုရလာပ်တွေ ကောင်းလိုက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် လူမှူးရေးရော စီးပွားရေးပါ တစ်ဆင်းပြီးတစ်ဆင်း စသည် စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေ စီးစဉ်လိုက်ပါ အဲဒါပြည်သူလူထူဆန္ဒနဲ ကောင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့သာ စီစဉ်ဦးဆောင်ရမယ် တစ်မျိုးသားလုံးအတွက်ကောင်းစေချင်ပါတယ် လူမှူးရေး စီးပွားရေး ဘာသာရေး စသည် တို့တက်ပြီး လွတ်လပ်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါစေ
Reply	kyawmintunt November 7, 2012 - 6:29 pm	အကြံအစည်း ပေးတာကောင်းလိုက်တာ ဒါလုပ်သင်တယ် အမျိုသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှမနစ်နာပါနဲ့ ကိုယ်အမျိုးသားအတွက်ကို ကိုယ်လုပ်ရမယ်ကွ ဒါကောင်းစားရေးအတွက်ကိုကြည်ပါ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပါသတ်မှတ်လိုပါ ဟိုတလောက ဇွဲကပင်ဆရာတော် နဲ့ ပြည်သူလူထူကောင်းဆောင် စည်းဝေး ထုတ်လိုက်ဥပဒေဟာ အားရလိုက်တာ ဒါအမျိုးသားအတွက်မပပျောက်စေရေးလုပ်လိုက်တာပါ ဒါမလုပ်လိုက်ရင်ဆိုးကျိုးတွေအများတွေနိုင်တယ်. အခုကြည်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးဟာ အမျိုးသားအတွက်သာဦးဆောင်းရမယ်ကိုယ်အုပ်ချုပ်တဲနိုင်ငံအတွင် အခုဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် အရင်တလောထုတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေ က ကုလာ တွေနဲ့ မဆက်ဆံရတဲ အခုကြည် စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကော့ကရိတ် မြတ်ဝတီ လှိူင်ဘွဲ ဘာအံ စသည် အားလုံးက ကုလာနဲ့တရုတ်သာများပါတယ် သူတို့ကသာ သူတို့အမျိုးသားအတွက်ဝင်ငွေသာလုပ်တယ် ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်သိသာလိမ်းမယ် ကားလက်မှတ် ၀ယ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာလဲအမျိုးသားပိုင်ဆိုင်တဲ့ကား ထိန်းချုပ်နဲ နယ်မြေအသီးသီးမှာ အမျိုးသားပိုင်ဆိုင်းတဲ့ စီးပွားရေးရှိသင်နေပြီး ဘာကြောင်းလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်အချုပ်အမျိုးသားဖြစ်နေလို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေသီးသီးမှာ အခြားအတွက် အပိုင်မပေးသင်ပါ ယာယီသာပေဆောင်သင်ပါသည် စီးပွားရေး လူမှူရေး စသည်ပေါ အခုဆိုရင်အုပ်ချုပ်တဲနယ်မြေထည့် ဘာမှမဆိုင် အခြားဝင်သူတွေ ၀င်လာ နေရာယူပြီး ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် နေရာယူသူတွေအများအပြားတွေရပါတယ် ဒါ ယာယီသာ ပိုင်ဆိုင်သင်ပါသည် နောက်ဆိုရင်အမျိုးသာနေရာမရှိ အခက်ခဲကြုံရလိုက်မယ် ထိန်းချုပ်နေတဲ့ကောင်းဆောင်တွေ ပြည်သူလူထူးကောင်းဆောင်တွေ စည်းမျဉ်းဥမဒေထုတ်လိုက်ပါ ကိုယ်ပိုင်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ဒီမိုဂရေစီ နိုင်ငံကိုအောင်မြင်တို့တက်ပါစေ
Reply	ဘကြီး November 9, 2012 - 12:33 pm	နိုင်ငံသား အချင်းချင်း မတည့်သရွေ့ ရန်ဖြစ်နေသရွေ့ သူတို့ တွေပဲ ချမ်းသာနေလိမ့်မယ်။ သူတို့ကျွန်တွေ ဖြစ်နေတာ နိုင်ငံသား စစ်စစ်တိုင်းရင်းသားတွေပါ ။ တိုင်းရင်းသူတွေ ကရင်မလေးတွေကို ဘ၀ပျက်စေတာ သူတို့တွေ ငွေနဲ့ဖျက်စီးလိုက်တာပါ မယုံရင် ဖျက်စီးခံကလေးမ လေးတွေကို တစ်ဦးချင်းမေးကြည့်ပါ
ရင်နာမိတယ် ။ စာတတ်ကြပါစို့. knu နဲ့ သူ့ တပ်သားတွေဟာ ကရင်ပြည်သူကို တန်း အခွင့်အရေး ရစေချင်ကြတယ် လို့မြင်တယ် အခုဒီမိုကရေစီဟာ တန်းတူ အခွင့်အရေး ဆိုတာ ကမ္ဘာလုံးလက်ခံနေကြ ပြီးသား ဘာလိုသေးလဲ စာတတ်ကြပါစို့ (မအ ကြပါနဲ့တော့) ။ အစိုးရ စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့. ဝေဖန်ရရင်တော့ ပြည်ထောင်စု မပြို ကွဲဖို့. အသက်ပေး သွားနိုင်သူတွေလို့မြင်ပါတယ်
Reply	မင်းကြီးညို December 22, 2012 - 6:06 pm	ကေအင်ယူက ကုမ္ပဏီတွေထံမှအခွန်အကောက်ယူခြင်း၊ ကားသမားများ နယ်စပ်ကုန်သည်များ
ထံမှအခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ စိုက်ပျိုးသူတောင်သူများထံမှအခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ အသေးစား
အလတ်စား စီးပွာရေးသမားများထံမှ အခွန်ကောက်ခြင်း။ ဒီကေဘီအေကလဲ အဲဒီအတိုင်းအခွန်
အမျိုးမျိုးကောက်ခံတဲ့အပြင် အာဝါဒေး(ခေါ်)လောင်းကစားဝိုင်းများလုပ်ပြီး ၀င်ငွေရှာနေခြင်း
တို့ကို လုပ်နေကြပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ရန်ပုံငွေပါတဲ့။ လူထုမှာတော့ ၀န်ထုပ်
၀န်ပိုးတွေ ပိနေကြရတယ်။ ရန်ပုံငွေမရှိရင်လဲ နယ်ခြားစောင့်တပ်(သို့မဟုတ်)ပြည်သူ့စစ်အဖြစ်
အသွင်ပြောင်းလိုက်ပေါ့။ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို အစိုးရမှတာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်။